Archive ref no: NCA-05190 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-05190
टोलको नाम:क्याम्पस टोल
बाबुको नामराम बहादुर विक
आमाको नाम:स्व सुन्तली विक
उनको भनाइपक्राउ पश्चात हामीले उनलाई आर्मीलाई बुझाएका हौं। अहिले उनी यहाँ छैनन्। कोहलपुर गाविस-३ का १९ वर्षीय हिक्मत विष्टलाई माओवादीको आरोपमा ०५९ वैशाख १३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरीले घरमा सुतेको अवस्थामा राति १२ बजे घरबाट गिरफ्तार गरे। गिरफ्तार पश्चात इलाका प्रहरी कोहलपुरमा लगिएका हिक्मतको अवस्था हालसम्म बेपत्ता छ। हिक्मतसँग सो दिन सो ठाँउका धनबहादुर विक, रामिमलन बाल्मिकी पेन्टा विक, टेकबहादुर कामी र शोभा शाहीलाई पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। गिरफ्तार गरिएकामध्ये गोमा शाही पाँच दिनपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट रिहा भएकी थिइन।